Ulenza njani ibali elifutshane | Uncwadi lwangoku
Lenziwa njani ibali elifutshane
Encarni Arcoya | 22/04/2022 11:35 | Amabali
Yikholwa okanye hayi, amabali amancinci, kuba mafutshane kakhulu, kunzima kakhulu ukuzibhala. Ukudibanisa ingcamango kwizivakalisi ezimbalwa, nakwisinye, akukho lula konke konke. Kodwa ngamanye amaxesha amaqhinga anokuthi afike ngokufanelekileyo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba lenziwa njani ibali elifutshane?
Ukuba ulubonile ukhuphiswano lwebali elifutshane okanye ungathanda ukuqalisa kolu hlobo loncwadi, ngoko siza kukuxelela yonke into ekufuneka uyazi malunga nabo.
1 Lithini ibali elifutshane
2 Iimpawu zamabali amafutshane
3 Iingcebiso malunga nendlela yokubhala ibali elifutshane
4 Amaqhinga okwenza ibali elifutshane
4.1 Okokuqala, ubufutshane
4.2 Khangela iindidi oziva ukhululeke kakhulu kuzo
4.3 Shwankathela, shwankathela kwaye ushwankathele
4.5 Sebenzisa iijiji
4.6 Sebenzisa idatha eyaziwayo
4.7 ukunciphisa ubuchule bakho
Lithini ibali elifutshane
Masiqale ngeyokuqala. Oko ke kukuchaza okuthethwa libali elifutshane. Ngokutsho kweRAE (iRoyal Spanish Academy) "Libali elifutshane kakhulu". Ingcaciso ende noko nguVall, othi ngolu hlobo lulandelayo:
«Ibali elifutshane alingombongo weprozi, okanye intsomi okanye ibali, nangona libelana ngeempawu ezithile ngolu hlobo lwesicatshulwa, kodwa isicatshulwa esibalisayo esifutshane kakhulu esibalisa ibali, apho ubufutshane, ingcebiso kunye nokuchaneka okugqithisileyo kolwimi kufuneka kuthathelwe ingqalelo, ngokufuthi kwinkonzo yeploti edidayo neyothusayo".
Ngamanye amazwi, sithetha ngebali elifutshane kakhulu apho ibali okanye ibali liqulunqwe ngendlela eshwankathelweyo.
Iimpawu zamabali amafutshane
Koku kungasentla, sinokuzoba iimpawu ezininzi ekufuneka sizithathele ingqalelo. Zezi:
Ubuzala. Ngengqiqo yokuba ibali elifutshane lifutshane kangangokuba lidla ngokuba phakathi kwamagama angamakhulu amahlanu ukuya kwamakhulu amabini. Hayi kwakhona.
Ayilohlobo olubalisayo. Enyanisweni, inentwana encinci. Kwelinye icala, imibongo, kwelinye, ezinye iintlobo zoncwadi. Kwaye kukuba "ikhululekile" ukuba ihlelwe kwinye kuphela, kuba unokufumana amabali amancinci eentlobo ezininzi.
nciphisa ibali. Uyakhumbula ukuba ibali kufuneka libe nesiqalo, isiqu kunye nesiphelo? Kaloku, yiloo nto esiyifumana kwibali elifutshane. Nangona sithetha ngeetekisi ezinokuqulatha amagama amahlanu kuphela, ibali elipheleleyo liya kuba kuwo onke. Yiyo loo nto kunzima kangaka ukwenza.
Bala izinto ezibalulekileyo. Oko kukuthi, ayijikelezi ehlathini kodwa ihamba ngokuthe ngqo kangangoko inokubalisa eyona nto ibalulekileyo ukuze amagama angachithi xesha endleleni.
sebenzisa iiellipses. Ngengqiqo yokuba, xa besebancinane kakhulu, abanakukwazi ukubalisa ibali elinesakhiwo esingaguqukiyo, kodwa badla ngokuya kuvutho-ndaba okanye isiphumo seqhina esenzeka ngaphambi kokuba sibaliswe kodwa ekubhekiselwe kulo.
Iingcebiso malunga nendlela yokubhala ibali elifutshane
Ngoku ewe, siza kunikezela lonke inqaku ukukunceda wenze ibali elincinci "njengoko kufuneka libe njalo". Ewe kunjalo, kuba sisicatshulwa esincinci kwaye kufuneka sichaze yonke into ngamagama ambalwa, akukho lula ukufezekisa, kwaye isincomo sethu esikhulu kukuba uziqhelise kakhulu de ufumane ukuba iitekisi eziphumayo zilungile. Kwaye ukuziqhelanisa nje? Hayi, kufuneka ufunde namanye amabali amafutshane ukubona indlela abanye ababhali abayenza ngayo (kwaye baphucule ubuchule babo).
Oko kuthethiweyo, ngaba siza kukuxelela indlela yokwenza ibali elifutshane?
Amaqhinga okwenza ibali elifutshane
Ngoku uyazi ukuba yintoni ibali elincinci kwaye kufuneka ugxininise kuyo, lixesha lokukunika amaqhinga okwenza ibali elincinci. Ngokuqinisekileyo, khumbula ukuba abokuqala abaphumayo abayi kuba bahle kakhulu, kodwa ngokuziqhelanisa uya kuphucula kwaye, ngubani owaziyo, mhlawumbi baya kuqala ukukubona.
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ibali elifutshane alinamagama acacileyo, kodwa kuthiwa, ukuba ingaphezulu kwama-200, ayisajongwa ngolo hlobo. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ube mfutshane kangangoko unokubalisa elo bali.
Khangela iindidi oziva ukhululeke kakhulu kuzo
Enyanisweni, ungasebenzisa ezininzi ngexesha elinye. Ukuba luncwadi "olwahlukileyo", oko kukuvumela ungazijongi kuhlobo olubalisayo, kodwa ukuba ukhululeke ukuzama into ovakalelwa ngayo.
Umzekelo, ibali eloyikisayo eliphela ngokuhleka kakhulu. Okanye enye yentsini ephela kwidrama.
Shwankathela, shwankathela kwaye ushwankathele
Iqhinga elenziwa ngababhali abaninzi, ngakumbi ekuqaleni, kukukhulula ubuchule babo bokuyila kunye bhala amaphepha okanye amagama angenasiphelo. Kwaye xa uyenza kwakhona, shwankathela elo bali.
Ngamanye amazwi, balibalise ngendlela ababefuna ngayo ibali. Kodwa ke into abayenzayo kukwenza isishwankathelo selo bali lokuqala. Ukuba lide kakhulu, liya kushwankathelwa kwakhona de sibe nalo "ncam ye-iceberg" eya kuba libali elincinci.
Ellipses yenye yezona zixhobo zisetyenziswa kakhulu kuba ikuvumela ukuba utsibe isakhiwo sesiqalo, esiphakathi kunye nesiphelo ukuya kuphela kwizinto ezibalulekileyo, ezinokuba sisenzo (iqhina) okanye isiphumo.
Amabali amafutshane abalaseleyo onokuwafunda zizele ziziphelo ezijijekileyo ezenza zonke ezi zinto zingasentla zibe nentsingiselo kwaye, kwangaxeshanye, ukuba awuyilindelanga.
Ukuba ufezekisa oko, uya kukwazi ukumbamba umfundi, ngakumbi abo "basela iincwadi", oko kukuthi, abo bafunda kakhulu. Ngenxa yokuba ngaloo ndlela uya kufumana impembelelo engakumbi.
Sebenzisa idatha eyaziwayo
Liqhinga elincinci elisetyenziswa ngabaninzi nabalenzayo ukuze bangabhali nantoni na eyenye ingeyiyo enomdla kubo. Nanjengoko abafundi, xa bebhekisa kweli tyala, baya kuyazi into ebhekiswa kumbhali, akusayi kufuneka acacise koko asuke aye kwinto eliya kuba yiyo ibali lakhe.
Ewe kunjalo, akulunganga ukuchitha imali eninzi kakhulu kuba inokunika umfanekiso wobuchule obuncinci ukuba awuyiphathi kakuhle.
ukunciphisa ubuchule bakho
Lumka, asitsho ukuba ugxile kumagama ekufuneka ubenawo. Kodwa kunoko kwizibonelelo oza kuzisebenzisa. Ngokukodwa:
Abalinganiswa: sebenzisa enye kuphela, zimbini. Ungaze usebenzise ngaphezu kwesithathu kuba awuyi kukwazi ukusisebenzisa ngokulula.
Iindawo: Nye. Ababini kakhulu. Ekwandiseni amabali amafutshane akukho ndawo yokuninzi.
Ixesha: oku kufuneka kube mfutshane kakhulu, nokuba yimini, iiyure ezimbalwa, imizuzu okanye imizuzwana.
Ukongeza kuwo onke loo maqhinga sikunike wona, kukho enye ekufuneka uhlale uyikhumbula: Ziqhelise. Kungale ndlela kuphela apho uya kukwazi ukuba yinkosi yamabali amancinci kwaye ngalo lonke ixesha uya kutsiba amanyathelo ude ube ngowona ubalaseleyo ekwenzeni amabali amancinci. Ngaba uyavuya ngayo?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Amabali » Lenziwa njani ibali elifutshane
UCristina Peri Rossi, ibhaso elitsha leCervantes. imibongo ekhethiweyo
UVeronica Garcia-Peña. Udliwano-ndlebe nombhali weSiqithi seMuses